Beesha Caalamka oo la wareegtey hogaanka shirarka doorashooyinka – MANABOLYO NEWS
Beesha Caalamka oo la wareegtey hogaanka shirarka doorashooyinka
Shirka ayaa ka socda Hotelka ay dagan yihiin madaxweynayasha Puntland iyo Jubbaland, waxaana halkaas ugu tagay Qoor Qoor, Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe si ay ugala hadlaan doodda ay wataan ee shirka uga soo qeyb gali la yihiin.
Qorshaha maanta waxa uu ahaa in Beesha Caalamka iyo madaxda dowlad Goboleedyada iney kulan ku yeeshaan Xalane si ay u dhex dhexaadiso Beesha Caalamka.
Wasiirka Warfaafinta Cusmaan Dubbe oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in Farmaajo uu ergo u diray madaxda maamul Goboleedyada dalka si ay shirka ugu soo biiraan, taa oo u muuqata mid uu iska sheeganayo iyadoo dadaaladan ay leedahay Beesha Caalamka.
Xogo aan helnay ayaa sidoo kale sheegay in madaxda maamul Goboleedyada ee daacaddda u ah Farmaajo inuu ku amray ineysan la kulmin Beesha Caalamka balse ay la kulmaan kaliya Madoobe iyo Deni.
Farmaajo ayaa saakay ku soo kallahay Teendhada Afisiyooni si uu Beesha Caalamka uga baajiyo kulanka ay la qaadan lahaayeen madaxda mamul Goboleedyada.
Waxaa muuqata in hadda wixii ka dambeeya in Beesha Caalamka ay la wareegeyso hogaanka shirarka doorashooyinka islamarkaana ay ka quusatay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday oo ka shaqeynaya sidii uu ku soo laaban lahaa isagoo diidan doorasho loo dhan yahay.
Breaking News: Ciidamada Madaxtooyada oo gabar muwaadin ah jirdilayo daawo
War degdeg ah : Inaa lilaah wa inaa ileehi raajicuun Xaaskii Cali Mahdi oo hada geeriyootey
Siyaasiga Ismail Hurre Buubaa : Qofkii igu nacaya iyo kii ka naxaya, Soomaaliya ma kala go’i karto
Ethiopia signs $456m deals to improve road links with neighbours
Puntland oo markale diidey in Shirka Arrimaha Doorashooyinka lagu qabto Puntland